Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-agba ọsọ agba agba Gabriel Batistuta Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Goal Machine kacha mara aha na aha njirimara; 'Batigol'. Gabriel Batistuta Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Nyocha nke Argentine Legendary Striker gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Gabriel Batistuta Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Gabriel Omar Batistuta mụrụ na 1st ụbọchị nke February 1969 na Avellaneda, Argentina site n'aka Osmar Omar Batistuta (nna) na Gloria Zilli (nne). Ọ bụ onye ikpeazụ a mụrụ na naanị nwa nke ndị mụrụ ya.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ezigbo enyi ya bụ nne ya. Enwere 5 na 6. Enwere m obi ụtọ na ịhụnanya Gloria nwere maka nwa ya nwoke, Gabriel. Ọ maghị na ọ mụtara igwefịm ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke Argentine.
Gabriel Batistuta na mama ya, Gloria.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ụdị egwuregwu n'oge ọ bụ nwata. Gabriel Batistuta tolitere na-amụta ụfọdụ ihe omume ntụrụndụ. Dị ka otu esi eguzo n’elu inyinya ọbụlagodi mgbe ha na agagharị.
Ọbụna ọ tụbara mkpọtụ mgbe ọ nọ na ha. Ọ ghọrọ onye ama ama na agbata obi ya n'ihi nkà ya.
Gabriel Batistuta Foto Childhoodmụaka- Onye Acrobat Master.
Mgbe ị nọ n'ụlọ akwụkwọ, Gabriel Batistuta nwere ike ịrapara na akụrụngwa egwuregwu ụlọ akwụkwọ ọ bụla. Ihe kacha amasị ya bụ Bipod Swing. Ọ naghị ahapụ ịhapụ ya ozugbo ịkọchara ya n'oge ezumike na oge mmechi.
Gabriel Batistuta Childhood - Nwa nwoke na-agha Swing.
Gabriel Batistuta childhood Story plus na-agbaghasị akụkọ ndụ - Discover Sport:
Ewezuga igwu egwu, enweghi mmekorita ya na football site na nwata. O doro anya, Gabriel enweghị mmasị na football n'oge na-adịghị anya. Ọ na-abanye na agụmakwụkwọ ya karịa egwuregwu.
Gabriel Batistuta bụ nwa akwụkwọ sayensị nke rọrọ na ọ ga-abụ dọkịta. Dika nwatakiri, o nwere ike itinye otutu awa n'ime ulo ogwu sayensi.
Gabriel Batistuta Foto Childhoodmụaka- Ọmụmụ.
Mgbe ọ bụ nwata, ọ họọrọ egwuregwu ndị ọzọ karịa bọl emesia choputara iso. Gabriel Batistuta dị ogologo maka afọ ndụ ya ma nwee mmasị na basketball. Ọ bụ ịhụnanya maka basketball mere ka ọ nwee mmasị na egwuregwu n'ozuzu ya.
Ọ na-egwu basketball site na nwata ruo mgbe 1978 FIFA World Cup mgbe agụụ ya maka football malitere ịmalite mgbe ọ hụrụ Argentina meriri asọmpi ahụ.
N'ụzọ nkịtị, o nwechaghị mmasị na ihe ga-abụ ọrụ ya n'ọdịnihu ruo n'afọ ahụ 1978.
N'oge okpomọkụ ahụ, Argentina kwadoro iko ụwa. A hụrụ Batistuta ka ọ na-ele ya anya La Albiceleste meriri nsogbu siri ike iji merie asọmpi ahụ.
Site n'oge ahụ, o kpebiri ịchụ egwuregwu ahụ ma soro ụfọdụ ndị enyi ya banye n'otu ụlọ ọgbakọ.
Ihe mbụ Batistuta mere gosiri na ọ bụ ezigbo ọrụ, na-enweghị obere ọrụ aka.
Ka o sina dị, Newell's Old Boys kwenyere na ọ ga-abụ onye ọkpụkpọ pụrụ iche wee nye ya nkwekọrịta ọkachamara.
Gabriel Batistuta Ndụ Ezinụlọ:
NME: Mr Osmar Omar Batistuta bụ nna Gabriel. Ọ bụ onye Alakụba / Arabian / Ottoman. Ọ bụ ya ka nwa ya nwoke sonyere Alhariabi SC football club na Qatar n'oge ọrụ ikpeazụ nke ọrụ ya (2003 - 2005).
Ndị nne na nna Gabriel Batistuta (Nna) - Osmar Omar.
SISTERS: Gabriel Batistuta bụ naanị nwa nwoke nke ezinụlọ ya. Ọ nwere ụmụnne nwanyị atọ bụ Elisa (n'aka ekpe), Gabriela na Alejandra (n'aka nri).
Batmụnna nwanyị Gabriel Batistuta.
Gabriel Batistuta Mmekọrịta Ndụ:
Mgbe ọ dị afọ 16, ọ zutere Irina Fernández, nwunye ya n'ọdịnihu, na ya quinceañera, ihe odide nke ya na ụbọchị ọmụmụ 15th. Na 28 December 1990, ha lụrụ na Saint Roque Church.
Di na nwunye ahụ kwagara Florence, Italy, na 1991, na otu afọ mgbe e mesịrị, a mụrụ nwa mbụ ha, bụ Thiago.
Gabriel Batistuta Nwunye na Nwa Mbụ, Thiago.
N'ihi ọrụ ọma dị n'egwuregwu Italiantali na ndị otu mba Argentine, Batistuta nwetara aha na nsọpụrụ.
Ọ na-ese ọtụtụ azụmahịa ma kpọọ ya na ọtụtụ ihe ngosi TV, mana n'agbanyeghị nke a, Batistuta na-anọgide na-abụ nwoke ezinụlọ na-adịghị ala.
Na 1997, a mụrụ nwa nwoke nke abụọ Batistuta, Lucas, na nwa nwoke nke atọ, Joaquín, soro na 1999.
Foto Gabriel Batistuta.
A mụrụ nwa nwoke nke anọ aha ya bụ Shamel na 2000. Nke ahụ bụ afọ Batistuta na ezinụlọ ya kwagara Rom, ebe ọ na-egwuri egwu Rome. Afọ abụọ ka a mụsịrị Shamel, Batistuta nyere ya ego n'aka Inter.
Gabriel Batistuta Biography Eziokwu - Nicknames:
Gabriel Batistuta enwetala aha aha atọ dị na ndụ ya. Aha aha mbụ bụ 'Batigoal'. Ọ bụ ngwakọta nke aha mbụ ya na ikike ịtụ egwu.
Nke abụọ is 'El Ángel Gabriel'. Aha a sitere na aha mbu ya 'Gabriel'. 'Mmụọ ozi' kwukwara maka ihe mgbaru ọsọ ya nke chebere Argentina na ọtụtụ oge.
N'ikpeazụ, Ọ nwetara 'Eze ọdụm' dị ka aha otutu. Nke a bụ n'ihi nke ya 'Eze ọdụm' Dị ka anya.
Gabriel Batistuta Akụkọ - Nwoke Obi Obi Odum.
Gabriel Batistuta Bio - Ihe nke BATIGOL aha otutu:
B bụ maka BRAVERY - ihe Batistuta nwere otutu. Tendonitis ma ọ bụ na ọ bụghị, nnukwu nwoke ahụ nwere, ruo ọtụtụ afọ, na-egwuri egwu n'ihe mgbu n'agbanyeghị agbanyeghị mgbu na ikpere aka nri ya, nanị n'ihi na ndị otu ya chọrọ ya.
A bụ maka ARGENTINA - Obodo nke Batistuta. Amụrụ na Reconquista, Santa Fe, ọ bụrụ onye isi ndị otu mba ma ugbu a ọ bụ onye kachasị enye goolu na mba Ajentina.
T dị maka iri atọ na abụọ - Afọ Batistuta. Ugbu a na chi ojiji nke ọrụ ya, ọ ka bụ otu n'ime ndị egwu kachasị egwu na Serie A.
Ana m maka ICON - nke bụ ihe Batistuta bụ, akara ngosi bọọlụ doro anya. A dike na Argentina, ihe mgbaru ọsọ ya na-emetụta ihe ndị ọzọ Diego Maradona na Alfredo di Stefano.
G bụ maka ọrụ - ihe Batistuta nyefere kacha mma. N'agbanyeghị mmerụ ikpere, ọ ka nyere goolu 18 maka Rome n'oge a. O meela ihe mgbaru ọsọ 207 na 332 anya maka Fiorentina na 54 na 74 maka Argentina.
O bu maka OLYMPIC STADUMUM - nke a na - akpọ Stadio Olimpico, ama egwuregwu ụlọ Rome, ebe Batistuta nwere ike nweta aha Serie A na - enweghị isi nke o kwesịrị.
L bụ maka ỤWA - nke a bụ, ka emechara, nwoke ahụ rapara na Fiorentina ruo afọ itoolu, ọbụlagodi mgbe a hapụrụ klọb ahụ na 1993, wee tie mkpu mgbe ọ gbasịrị bọọlụ megide klọb ahụ na uwe elu Rome.
Gabriel Batistuta Okpukpe:
“Gebriel” bu akwukwo ndi Kristain nke aha ndi islam "Cebrail". (aha mmụọ ozi ma ọ bụ onye nsọ dabere n'okpukpe ị kwenyere) - enweghị ihe ịrịba ama doro anya na aha mbụ ya.
“Oma” (aha ya bụ aha) bụ aha Alakụba. "Batistuta" (aha nna ya): Anyị amaghị ihe nke a pụtara. Ikekwe aha Latin ma ọ bụ aha ndị Kraịst.
Ikekwe, ị ghọtara ihe m ga-ajụ. Gabriel Omar Batistuta o nwekwara onye Alakụba? .. Azịza ya bụ 'EE'.
Ihe ole na ole ederede na Argentina na ihe atụ: know maara aha aha onye isi ala Argentina. A na-akpọ ya "El Turco".
N'ezie, ọ bụghị onye Turk kama o nwere nna nna Ijipt nke gara South America na narị afọ gara aga (ihe dị ka narị afọ 4-5 gara aga.).
N'oge ahụ, Ijipt dị ka ala nke Ottoman Alaeze ndị bụ ngwakọta nke ndị Turkey, ndị Ijipt, ndị Algeria, ụfọdụ mba ndị Arab na ụfọdụ mba Balkan.
Laghachi aha "Omar". Nke a bụ islam (ma ọ bụ ka mma ịsị, aha Arabic. Ọzọkwa, ọ bụghị aha Turkic). Agbanyeghị, ndị Ottom ejirila aha Alakụba (Arabic), yabụ, Omar (ma ọ bụ Omer) bụkwa aha Ottoman.
Ya mere, ana m akpọ gị òkù ka ị ghọta myirịta dị n'etiti onye isi ala Argentina na Gabriel Omar Batistuta na m na-ekwu na Gabriel Omar Batistuta nwere nna ochie (ma eleghị anya, ọkara) si Ottomans.
Nke a pụtara na nna nna ya bụ, ma eleghị anya, onye Turk, ma eleghị anya ọ bụ onye Arab sitere n'Ijipt, ikekwe site na Syria, ma eleghị anya site na mba Balkan, ma eleghị anya site na Algeria. Algeria dara nke ọma n’ihi na Zidane bukwara ọkara Algeria
Gabriel Batistuta Untold Biography Eziokwu - International Accolades:
Na mba ụwa, ọ bụ Argentina na-eduzi ihe mgbaru ọsọ. Ọ na-egwuri egwu na iko ụwa atọ.
Na 1999, Batistuta bụ nke atọ na onyinye FIFA World Player of the Year. Na 2004 akpọrọ ya na FIFA 100 ndepụta nke ndị kachasị bọọlụ kachasị elu 125.
N'ihe egwuregwu zuru oke nke na-emecha ọgwụgwọ, isi ya na ikike ịnweta ikike, a maara ya dị ka otu n'ime ndị na-emezu ọgbọ ya nke ọma. Diego Maradona kwuru na Batistuta bụ onye kasị mma ọ hụrụ mgbe ọ na-egwu egwuregwu ahụ.
Gabriel Batistuta - Onye Mgbaru Ọsọ nke Argentine.
Na 1998 World Cup, Batistuta dekọtara okpukpu nke abụọ ya na asọmpi mba ụwa, na-eme ka ọ bụrụ naanị onye ọkpụkpọ egwuregwu ọ bụla rụzuru ọrụ a. Agbanyeghị, ezughị ebe Netherlands na-akụda Argentina na nkeji iri na ise.
Batistuta kwupụtara na 2002 World Cup ga-abụ asọmpi mba ụwa ikpeazụ ya, na-enye Argentina mmetụ mmetụta uche.
N'ịga asọmpi ahụ, ndị otu ahụ nwere ọfụma maka ohere ọ ga-eji merie. Ọzọkwa, ọ dị mkpụmkpụ.
Chọta onwe ya na "Otu ọnwụ", La Albicelestea kpochapụrụ n'egwuregwu ahụ na oghere mmeghe maka oge mbụ kemgbe 1962. Ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ ya maka Argentina meriri Nigeria na 2nd June 2002.
Gabriel Batistuta Mgbaru Ikpeazụ megide Nigeria.
Batistuta rụzuru ọrụ ya na mba ụwa na ihe mgbaru ọsọ 56 na-egosi naanị ihu 78-ọnụọgụgụ nke nwere ike ọ gaghị emeli.
Gabriel Batistuta Biography - Ọrụ Clublọ na Nchịkọta:
Ọrụ ọrụ Batistuta wee malite ịmalite ngwa ngwa. Mgbe oge ezumike na Newell gasịrị, ọ kwagara River Plate. N'ebe ahụ, ọ nọ na-alụ ọgụ ka o jisiri ike ịchọta azụ nke netwọk naanị 3 ugboro na 19 anya.
Ihe malitere ịmalite Batistuta na nkwụsị ya na Boca Juniors. Clublọ ọrụ ahụ mere ya ebe ọ na-ebuso ya agha ma zaghachi site na itinye ihe mgbaru ọsọ 13 na inyere Boca aka inweta mmeri asọmpi.
Impressivedị ya mara mma natara nyefe na Fiorentina Italiantali na 1991. Ọrụ Batistuta na La Viola ga-eme ka ihe nketa ya dị ka otu n'ime ihe ndị kachasị egwuri egwu ka ọ bụrụ amara mgbe niile.
E mechara ziga ya na Rom ma bịanye aka na nkwekọrịta afọ 3. Ego a kwụrụ maka Batistuta ka bụ ego kachasị elu akwụgoro maka onye ọkpụkpọ karịrị afọ 30.
N'oge mbụ ya na Roma, ọ chụrụ klọb ahụ na mmeri Scudetto mbụ ha kemgbe 1983, na-atụle ihe mgbaru ọsọ 20 na 28 anya.
Oge na-eso ya na Roma, ọ gbanwere nọmba uwe elu ya site na 18 ruo 20 maka ọnụ ọgụgụ ihe mgbaru ọsọ o meriri n'oge mkpọsa mmeri nke Scudetto. Edere ya na AS Roma Hall of Fame.
Mgbe oge 3 gasịrị na Rome, e nyere ya ego na Inter Milan, wee hapụ totali iji sonyere Al Arabi na Qatar tupu ọ laa ezumike nká.
Na Qatar, o mebiri ndekọ maka ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ e nyere na oge na 25, ihe ndekọ nke akụkọ akụkọ Qatari bụ Mansour Muftah nwere.
Na mkpokọta, Batistuta bụ onye nke iri na otu kachasị ama na Serie A akụkọ ihe mere eme nwere ihe mgbaru ọsọ 184 na egwuregwu 318 na Roma, Fiorentina na Inter Milan.
O mere 516 ọrụ ọhụụ, ihe mgbaru ọsọ 300, tinyere 207 maka Fiorentina n'oge afọ itoolu na Florence.
Gabriel Batistuta Amkwụ Mpụga Arịrịọ:
Akụkọ akụkọ Argentina Gabriel Batistuta rịọrọ dọkịta ka o bepụ ụkwụ ya n'ihi oke ihe mgbu ọ chere mgbe ọ lara ezumike nká na 2005.
Onye gara aga, onye tinyere oge 56 na okpu mba 78 na nchedo egwu na Serie A ruo ọtụtụ afọ, tara ahụhụ nke ukwuu site na nrụgide ọ tinye n'ahụ ya n'oge ọrụ 17 afọ.
Ihe kpatara Gabriel Batistuta Ji Bido forkpụ ụkwụ.
Batistuta, onye natara ugwo megide England na 1998 World Cup, enweghị ike ịga ije ma na-akwa akwa ma ọ gaghị enwe ike ịbịaru onwe ya na ime ụlọ ịwụ ahụ.
Gabriel Batistuta ezumike nká Ndụ:
Mgbe ọ nwụsịrị, ọ kwagara Perth, Australia ma mesịa laghachikwa Argentina na 2007 iji malite ụlọ ọrụ ụlọ. N'agbanyeghị na ọ na-enweta akara nhazi ya na Argentina, ọ dịghịzi etinye aka na football. Kama nke ahụ, ọ na-ahọrọ igwu egwu.
Ọ nwere ọtụtụ ịnyịnya nke ọ na-elekọta n'ugbo ya nke ya na nna ya nwere. Batistuta makwaara izu ehi. N'ịbụ onye na-achọ Polo, ọ na-egwu golf. E hotara ya n'otu oge na-ekwu, 'Egwuregwu football anaghị amasị m, ọ bụ naanị ọrụ m.'
Gabriel Batistuta Untold Biography Eziokwu - N’etiti ndị kachasị mma n’egwuregwu bọọlụ:
Batigol bụ otu n'ime ndị kachasị egwu na akụkọ ntolite egwuregwu… yana ọkacha mmasị ụmụ nwanyị.
O gositụghị mmasị ọ bụla gbasara ọrụ ejiji, mana ọmarịcha, ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ya na-amasị ndị inyom ya gburugburu ụwa, bụ ndị raara otu ibe peeji nke ọzọ na webụ.
Gabriel Omar Batistuta- Onye Kachasị Mma N'ịgba bọọlụ Mgbe.
N'ikpeazụ, ọ nabatara na-achọsi ike mgbe nile maka nlebara anya ya ma nyefee ya obere ụlọ ya na ndị na-emepụta ihe mgbe ọ na-akpọsa ihe ngosi ntanye na '90s.
Ndị inyom hụkwara ya n'anya mgbe ọ bụ nwata, ebe a na-ewere ya dị ka otu n'ime ndị na-egwu egwuregwu bọl nke ọgbọ ya. A hụrụ ya n'azụ ọtụtụ azụmahịa nke Argentine ọbụna mgbe ezumike nká.
Gabriel Batistuta Untold Biography Eziokwu - Akụkọ Mgbe Ochie na Florence:
Mgbe Fiorentina weghaara Serie B na 1993, Batistuta nọrọ na klọb ahụ ma nyere ya aka ịlaghachi n'ụgbọ elu Italiantali otu afọ mgbe e mesịrị.
Akụkọ banyere Florence, ndị Fiorentina Fans wuru ihe oyiyi ọla kọpa nke ndụ ya na 1996.
Na asọmpi niile na Fiorentina, Batistuta nwetara nchịkọta nke 207 ihe mgbaru ọsọ na 333 anya -a na-egbu egbu .62 ihe mgbaru ọsọ ọ bụla. Tụkwasị na nke ahụ, o meriri ihe mgbaru ọsọ 26 nke na-agba ọsọ na 1995 wee nyere Fiorentina aka Coppa Italia na Supercoppa na 1996.
Gabriel Batistuta Biography Eziokwu - Ajụjụ Ọnụ:
Ndị a bụ Batistuta's Q & As si Bọbụ Ụwa.
Bọbụ Ụwa: Anyị ahụbeghị gị na Europe ruo oge ụfọdụ, Gabriel ...
Gabriel Batistuta: Anaghị m akpọ ndị nta akụkọ mgbe m bịara Europe! N'Ịtali ha na-eme mkpesa na anaghị m eleta, ma enwere m ụlọ na Florence nke m na-eleta ugboro atọ ma ọ bụ ugboro anọ n'afọ. Anaghị m akpọ tupu oge ahụ!
Ya mere ndụ dị mma site na football?
Apụghị m mkpesa.
Ị na-ele ọtụtụ football?
Ana m ekiri egwuregwu karịa ugbu a karịa mgbe m na-egwu egwu. Ana m aga n'ámá egwuregwu mgbe m nwere ike, ma ana m elekwa ọtụtụ egwuregwu na TV. N'oge a na ndụ m, m ka na-akwụsị nrụgide 20 nke m mere.
Ị na-eme atụmatụ ịlaghachi na bọlbụ n'oge ụfọdụ?
Enwetara m diplọma ịkụzi m mana atụmatụ m, ma ọ bụrụ na m laghachi azụ football, ga-abụ onye njikwa otu, ọ bụghị dị ka onye nchịkwa.
Ọ bụ n'ihi na ịkụziri ndị mmadụ ihe karịrị nrụgide?
N'ụwa nile ọ bụ otu. O di nwute na ọrụ ịzụ ihe bụ obere oge, n'agbanyeghị ma ị meriri ma ọ bụ. Anaghị m enwe obi ụtọ banyere nke ahụ!
Ị nwere ọkacha mmasị maka iko ụwa, ọzọ karịa Argentina?
Brazil ga-abụ ọkacha mmasị. Spain na-egwu egwu. Argentina nwere ezigbo ohere n'ihi na ha nwere ezigbo ndị egwuregwu na onye nchịkwa nke meriri n'ọtụtụ oge ma nwee ike ịnye echiche ya na-emeri ndị egwuregwu ahụ.
A katọrọ Diego Maradona n'ihi na ọ na-agbanwe ọtụtụ ndị na ndị ọkachamara. Ndi iko World Cup nwere ike iche, n'ihi na o nweghi ike igbanwe ya nke 23?
Ihe dị iche ga-abụ na ọ ga-arụ ọrụ na otu egwuregwu ahụ maka otu ọnwa gara aga, ọ dabere na otu ndị egwuregwu na-enwe mmetụta mgbe ha rutere n'Ọchịchị Ụwa.
Ị na-egwu Maradona na 1994. Ọ bụ àgwà kachasị ike n'òtù egwuregwu ahụ?
Ee e, anyị niile nwere ezigbo ndị mmadụ. Anyị niile chọrọ ihe kacha mma maka otu. Ya mere, anyị na-ahapụ ndị mmadụ ka ha kwuo okwu na ụlọ mgbakwasa ma jide n'aka na anyị niile nụ. Maradona abụghị otu.
Ndi 1998, mgbe ị ruru nkeji iri na ise, ọ ga-adịrị gị mma?
Enweghị otu iko atọ nke ụwa m na-egwuri egwu bụ maka m maka na anyị emerighị. Nye anyị ndị Argentinị ọ bụ otu ihe ahụ na-alaghachi mgbe egwuregwu atọ ma ọ bụ egwuregwu ise.
Gịnị mere i ji kwusi ọrụ gị na Qatar? Ị nwere ike ịga ebe ọ bụla.
Anọ m na njedebe nke ọrụ m. Achọrọ m ahụmahụ ọzọ, Achọrọ m ịmụ banyere ọdịbendị ọzọ. Ọ bụrụ na m gara Spain ma ọ bụ England, ọ ga-abụrịrị ihe dịka ihe m nwewororịrị.
Ihe dị iche iche banyere ụdị ndụ ahụ. Ọ dị ihe siri ike?
Mba, enwere m ahụ iru ala site na mbido. Mụ na nwunye m na ụmụ m gara. Anyị hụrụ ụlọ akwụkwọ dị elu. Ụlọ ọgwụ ahụ dị elu. A mụrụ nwa m nke anọ n'ebe ahụ ma chọọ m ka a mụọ ya n'ebe ahụ. Nke ahụ bụ otu ihe mere m ji nọrọ ruo afọ abụọ.
Ma ugbu a ị na-etinye aka na 2022 World Cup bidoro Qatar.
Afọ abụọ m bi na ya nwere ahụmahụ magburu onwe ya maka mụ na ezinụlọ m. M kwụsịrị igwu egwu n'ihi na enwere m nsogbu na nkwonkwo ụkwụ m, mana oge m nọrọ n'ebe ahụ na-adị m mgbe niile. Ọ bụ ihe obi ụtọ na Qatar ga-akpọtụrụ ya n'ihi na ọ pụtara na m ga-ahapụ echiche ziri ezi n'ebe ahụ.
Otu World cup na Qatar ga-abụ ihe dị iche iche ndorondoro. Anyị na-eche echiche banyere Finals World Cup na obodo ndị mara mma dị ka Buenos Aires ma ọ bụ Rom.
Ụkpụrụ FIFA bụ football maka onye ọ bụla. Anyị enwebeghị iko World n'ime etiti ọwụwa anyanwụ. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ụwa Arab ka meghere. Anyị nwere ohere maka FIFA inye ohere ụwa Arab.
Kedu ka ọnọdụ egwu a dị? Ndị mmadụ na-eche banyere okpomọkụ.
Ejiri m ebe ahụ ruo afọ abụọ. Ọ na-ekpo ọkụ mana ị nwere ike igwu egwu nke ọma. Ugbu a, ha na-arụ ọrụ na usoro ntụrụndụ na stadium Al Sadd ebe nkà na ụzụ na-eme ka okpomọkụ dị n'ime stadium bụrụ nrịgo 20 mgbe ọ bụ 30 ma ọ bụ 40 n'èzí.
Kedu ihe ị chere gbasara egwuregwu Thierry Henry?
Mgbe ị nọ na pitch, ihe na-eme na ị maghị ihe mmeghachi omume ga-abụ. Ma eleghị anya, ọ maghị ihe o mere.
Ya mere, Henry mere ihe ngosi?
N'ezie. Mana FIFA kwesịrị ịnakwere enyemaka nke teknụzụ. Agaghị m ahụ ihe mere football agaghị eji mepee ụzọ ya maka nkà na ụzụ ọhụrụ.
Ọ dị mgbe ọ bụla ị na-arụ ọrụ mgbe TV replays ga-enyere aka?
N'ezie. A na-enyo enyo banyere ndị na-ekpechite ọnụ. Ndị mmadụ na-eche otú onye ọkagharị ahụ ga - esi hụ ihe ndị a na - ahụ na TV? Replays ga-enyere aka wepụ ihe ọ bụla enyo.
Lionel Messi Egwuru egwu maka ndị agadi gị, Newell's Old Boys, ma gaa Europe dịka nwata. Ị gara Ịtali mgbe ị mere agadi. Ndi ndi egwuregwu na-aga Europe n'oge a n'oge?
Ee. Mgbe m malitere igwu egwu, m bụ 18 afọ. Mgbe ole Messi bụ 18 ka o meriri trophies na Barcelona. Nke ahụ bụ ókè abụọ. Amalitere m oge, ọ malitere obere. Eziokwu bụ ebe dị n'etiti.
E nweela ọtụtụ nrụgide Messi site na nwata. Ị nwere ike tolitekwu nwayọ.
Ndị egwuregwu South America na-eto ngwa ngwa, site na egwuregwu, mana n'uche ha akwadoghị nke ọma. O siri ike ịhụ onye Spanish, Italiantali ma ọ bụ onye ọkpụkpọ Bekee na ngalaba nke elu mgbe ọ bụ 18.
Na Argentina, mgbe ị dị afọ 18, ịgbalarị n'otu asọmpi otu ma ọ bụ abụọ. Ndị klọb kwesịrị ịre, ya mere ha na-ere onye ọkpụkpọ 20 afọ n'ihi na onye ọzọ dị n'azụ.
Merci vivement pour cette semaine formations bien détaillés, ça fait longtemps que je ai en vie de savoir gbakwunyere mon meilleur footballeur au monde omar Gabriel batistuta. Na-eme ka ndị mmadụ mara ihe dị mkpa, na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe ọ bụla na-eme ka ndị ọzọ na-eme ka ndị ọzọ na-eme ihe
Mmeghachi omume nke Avec mes. Bahia du maroc
Bọchị gbanwee: Eprel 15, 2021
Bọchị agbanweela: Machị 27, 2021
Bọchị gbanwee: Eprel 26, 2021